प्रतिपक्ष एमालेको किचलो पछि सदन रोकियो ! — donnews.com
प्रतिपक्ष एमालेको किचलो पछि सदन रोकियो !
'१४ करोड १९ लाख रुपैयाँ नातागोता र कार्यकर्ता पोस्न रकमान्तर गरिएको आरोप'
पोखरा । बजेट सम्बन्धि छलफलका लागि आज बसेको गण्डकी प्रदेश सभा बैठक प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोध पछि स्थगित भएको छ । असारको दोस्रो साता सरकारले गरेको रकमान्तरको विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष दल एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।
नवगठित मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरेपछि बल्ल पहिलोपटक सो बजेटमाथि रातो किताब तयार पारेर छलफल गर्न संसद बैठक डाकिएको थियो । तर सरकारको कार्यशैली खेदजनक र बजेट ऐन नियम विपरित भएको भन्दै प्रतिपक्ष एमालेले बैठक नै बस्न दिएनन् ।
असारको दोस्रो साता सरकारले १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो । यो रकम नातागोता र कार्यकर्ता पोस्नका लागि रकमान्तर गरिएको आरोप लगाएको छ । ‘के कारणले रकमान्तर गर्नुप¥यो ? योजना कसरी छनोट भए ?,’ एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले बैठकमा भने, ‘यसको फेहरिस्थ नआउँदासम्म यो सदन अघि बढ्न नसक्ने जानकारी गराउँछु ।’